तपाईंको आफ्नै हातले हार। यो सम्भव छ?
महिला आभूषण धेरै हुँदैन। शायद उचित सेक्स को धेरै आभूषण संग तीन बक्से सामग्रीहरू अध्ययन गरेपछि त्यहाँ नयाँ ब्लाउज वा पोशाक पूरक गर्न केही छ कि जहाँ एक अवस्था संग सामना गर्नुपरेको थियो।
स्थिति आफ्नो कल्पना र कुनै पनि घरमा अवस्थित केही unpretentious वस्तुहरु मदत गर्न बचत गर्नुहोस्। आज हामी आफ्नो आफ्नै हातले सरल तर मूल हार के तपाईं सिकाउन प्रयास गर्नेछ। गरेको को क्लासिक सुरु गरौँ। कालो र सेतो को संयोजन कहिल्यै फैशन बाहिर जान्छ। यी रंग को सजावट दैनिक प्रयोगको लागि, तर पनि बाहिर एक साँझ लागि मात्र होइन, धेरै लुगाहरू अनुरूप हुनेछ। आफ्नो हातमा एक हार जस्तै पन्ध्र मिनेट उत्पादन हुन सक्छ, र आनन्द यो तपाईं धेरै वर्ष ल्याउनेछ। पनि कुनै एक अरू त्यहाँ यस्तो कुनै गहने छ भनेर थाह पाउँदा एक पक्ष जान राम्रो।
तपाईँले एक मीटर लामो, एक सिलिन्डर को आकार मा छ ठूलो कालो मोती र पाँच पारदर्शी oblong मोती को संकीर्ण कालो रिबन (1 सेमी) तयार गर्न आवश्यक छ। यस्तो विवरण कि बुनाइ लागि सामान बेच्छ कुनै पनि स्टोरमा उपलब्ध छन्। आफ्नो हातमा एक हार faceted मोती टिप्न, अधिक शानदार राम्रो भयो लागि - त्यसपछि तिनीहरूले प्रकाश को प्ले को ध्यान आकर्षित हुनेछ। यस्तो विवरण कि बुनाइ लागि सामान बेच्छ कुनै पनि स्टोरमा उपलब्ध छन्।
यो सबै आफ्नो कल्पना मा निर्भर गर्दछ - आफ्नो हातले मोती को हार सधैं धेरै प्रभावशाली र आधुनिक, र कसरी यो गर्न देखिन्छ। नोट: मा मोती टेप सजिलै यो पास छ कि एक यस्तो खोल्ने हुनुपर्छ। अब तपाईं जान तयार छौं। टेप तीस सेन्टिमिटर को अन्त फिर्ता खडा र केही छलछामको गाँठो बाँध। यो टेप मा मोती समाधान गर्न गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि, अर्कोतर्फ स्ट्रिङ मोती बारी गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। सुरु र कालो मनका काम समाप्त। गर्न टेप को अन्त्य भंग छैन, तिनीहरूले गोंद फैलाउन र त्यसपछि सुक्खा वा बिस्तारै cauterize। पछिल्लो मनका strung हुन्छ, एक ठाउँमा nodules फिक्सिंग बाँध। तपाईंको आफ्नै हातले बनाएको आफ्नो हार, तपाईं सक्नुभयो! बिस्तारै रिबन बांधन, तपाईंको घाँटी वरिपरि यसलाई लगाउने।
पछिल्लो शताब्दीको 60s मा अतुलनीय सन्ध्याले मोनरो एक चिटिक्क हटाउन सकिने कलर संग सुरुचिपूर्ण पोशाक मा shone। फैशन लाभ र आज महिला लगाउने खुसी छन् एक हार-कलर। आफ्नै हातमा यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ रूपमा सजावट छैन रूपमा गाह्रो छ बनाउन। विशेष प्रभावशाली कलर मोती को हेर्न छन्। मौसम को प्रवृत्ति को sixties को शैली मा गोलाकार वस्तुहरू छन्। को सजावट को सजावट ठूलो पुराना बटन, rhinestones छन्, तपाईं कलर सुन्दर पिन कस्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
सोभियत समयमा, उनको दराज परिवर्तन कारण स्टोर विविधता को scarcity गर्न स्वयं थियो। हाम्रो समय मा, मार्गदर्शन काम - सधैं लोकप्रियता को शिखर मा हुनेछ आधुनिक लुगा मा लेखकको जीवन्त महत्तव छ। अलग गर्न सकिने कलर तिनीहरूले छुट्टी शोभा, तपाईँको दराज बाट एउटा कुरा प्रयोग गरेर, विभिन्न तस्बिरहरू सिर्जना गर्न परिवर्तन गर्न सकिन्छ किनभने कठोरता को कार्यालय बाट राम्रो हो।
समाप्त नमूना महिला windbreakers। आफ्नो हातले महिला ज्याकेट
आवेदन Cosmonautics दिन - अन्तरिक्ष मा अगाडी!
कसरी आफैलाई र अरूको आनन्द गर्न floss को Baubles बुनाई गर्न
त्यहाँ पुरुष दुराग्रह छ कि छैन भनेर
एक दुई Trip.com: वास्तविक मान्छे सेवा बारे समिक्षा
घरेलू उत्पादन: को छर्रे हटाउन मिसिन
भेनिला हलुआ: पाक व्यञ्जनहरु
Hyperthyroidism लक्षण: पहिचान र विनाश रोक्न
गर्भावस्था को समयमा कफी पिउने
तपाईं एक चिकन कसरी रोस्ट थाहा निश्चित हुनुहुन्छ?
डिकोडिङ योजना, वर्णन: crochet संग प्रतीक